Akwụ ụgwọ Akaụntụ Ahịa Amazon Site na Mbubata Mbubata | Kpọtụrụ anyị ugbu a
Akwụsịrị Akaụntụ Amazon maka Mbupu Mbubata?
Akwụsịrị Akaụntụ Akaụntụ Amazon
Ekpetie fi didie ke idem edieke owo ọnọde fi ufen ke ndudue oro akanam m ?namke? Ee I. Amaara m nke jọgburu onwe ya mana nke a nwere ike bụrụkarị ihe kpatara ndị na-ere ahịa Amazon. Amazon na-agbasi mbọ ike inye ndị ahịa kachasị mma. Nke a bụ ihe kpatara enyere ndị na-ere ahịa ọtụtụ ụkpụrụ na atumatu. Ma enwere oge mgbe ndị na-ere ahịa enweghị ụta. Otu ọnọdụ dị mkpa bụ Amazon Late Shipment Rate. Ọtụtụ mgbe, ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-ejedebe na-egbochi ndị na-ere ahịa ha kwụsịtụrụ. Nke a bụ nsogbu na-abịanụ maka ndị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmụ ihe Mbubata Mbubata nke Amazon bụ otu ị ga - esi zere otu ọnyà ahụ mgbe ahụ edemede a bụ maka gị.
Gịnị bụ Amazon Late Mbupu Rate?
Ugbu a ịmalite, ọ dị mkpa ịghọta ihe Mbubata Mbubata Amazon bụ?
Mbubreyo Mbubata nke Amazon na-eme mgbe onye na-ere ụgbọ mmiri na-ebu otu iwu ka ọ daa ma ọ bụ dịka usoro Amazon mara. Nke a nwere ike bụrụ ihe mgbagwoju anya maka ndị na-ere ahịa mbido. Dịka ọmụmaatụ mbufe na-eme mgbe iwu ahụ hapụrụ ụlọ nkwakọba ihe. Na nnyefe na-emezu mgbe iwu ahụ ruru onye ahịa. Ọ dị mkpa ịmata nke a n'ihi na nke a bụ isi ihe kpatara Amazon Late Delivery. O doro anya, ọ bụrụ na onye na-ere ere enweghị ike izipu iwu na oge ọ ga - enyefe ya n'aka onye ahịa. Mbubata Mbata Amazon ma Mbubata Mbupu ma ọ bụ LSR n'ihi nke a na-akwụsị akaụntụ ndị na-ere ahịa.
Dị ka Amazon kwuru,Ogologo Mbupu Mbupu (LSR) na-anọchite anya ụgbọ mmiri enyere aka akwadoro mgbe ụbọchị ụgbọ mmiri a tụrụ anya dịka pasent nke iwu niile".
N'asụsụ dị mfe, ọ bụ pasent nke iwu a na-ebufe mgbe ụbọchị mbupu a na-atụ anya gafere na iwu niile ebubatara.
Oge Mbupu Mbupu Amazon nwere ike gbakọọ site na iji usoro ndị a n'okpuru:
LSR = Ọnụ Ọgụgụ nke Iwu Mbupu / Iwu Mbupu Ego * 100
Iwu Mbupu Mbubreyo Amazon
Dịka na Usoro Mbupu Mbubata nke Amazon, LSR na-agbakọ site na 10 ruo ụbọchị 30 nke oge ntụgharị. Na, achọrọ onye na-ere ere ka ọ debe ọnụego n'okpuru 4%. Ọ bụrụ na onye na-ere ahịa enweghị ike ịnwe ọnụego n'okpuru 4% mgbe ahụ akaụntụ ya nwere ike kwụsị ma ọ bụ kwụsịtụrụ.
Nke a bụ isi ihe onye ọ bụla na-ere ahịa chọrọ izere. N'ezie, anyị na-enweta ọtụtụ ndị na-ere ahịa ndị na-ata ahụhụ site n'otu nsogbu. Iji weghachite akaụntụ gị na-ere, ọ dị mkpa ka ị nwee atụmatụ nke ime ihe. Atụmatụ a nke omume ga-abụ isi ihe dị mkpa nke gị Akwụkwọ Ozi Mgbasa Ozi Amazon.
Tozọ Zere Mbubreyo Amazon Mbubreyo
Enwere ike ịnwe ọtụtụ ihe kpatara Mbubata Mbubata. Mana iji belata nsogbu a, mmadụ kwesịrị ịma etu esi emeso ya. Ọ dị mkpa na ị kwadoro iwu nke onye ahịa gị tupu ma ọ bụ na ụbọchị mbufe a tụrụ anya ya. Site na nke a, ndị na-azụ ahịa ga-enwe ike ịhụ ọkwa nke usoro ha iji mepụta ahụmịhe ndị ahịa ka mma maka ha. Dịka e kwuru na mbụ, a ga-atụle ịtụ ahịa gị mbubreyo ma ọ bụrụ na ụbọchị nkwenye maka mbupu bụ mgbe ụbọchị mbubata echere.
LSR bụ ọnụọgụ Amazon dị mkpa ma ọ dị mkpa idobe nke a iji mee ka mmekọrịta gị na onye ahịa gị dị mma. Nke a ga - enyere gị aka izere nkwụsịtụ n’ikpeazụ.
Ugbu a n'okpuru bụ ụzọ ị ga - esi zere mbubata mbubreyo Amazon:
Zere idepụta iwu na ị gaghị enwe ike ịbuga na ma ọ bụ tupu ụbọchị echere.
Kwenye mbupu ahụ ozugbo enwere ike mgbe mbupu ahụ hapụrụ ụlọ nkwakọba ihe. Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-agba gburugburu ma ọ naghị abụkarị mbupu kama ọ bụ nkwenye na ezigala mbupu ahụ. Maka nke a, ị ga-akpali nke a ozugbo o kwere omume ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo ọ ga-ekwe omume.
Lelee usoro nyocha gị wee hụ na ị naghị ada ada n'iwepụta mmezu ọ bụla (dabere na ụdị mbupu ntụgharị Standard, Prime).)
Gbalịa ịmepụta oge ezi uche dị na ya maka ndị ahịa gị site na gbanwezi oge ejizi.
Na-adị njikere mgbe niile maka oge kachasị elu nke ire ngwaahịa gị. Ọmụmaatụ: Onu ogugu nke ahia maka ikuku ikuku di elu karie oge udu mmiri.
Ọ bụrụ na ị tozuru etozu Zụta igbe ma na-eme atụmatụ maka otu ihe ahụ, ijide n'aka na ị ga-enwe nọmba ngwaahịa zuru ezu n'ụlọ nkwakọba ihe gị iji mejuo ọtụtụ ihe ị chọrọ.
Cheta na: N’okpuru ebe a, a na-ajụkarị ajụjụ. Ihe ndị a nwekwara ike inyere gị aka ijikwa mbupu gị ma zere nkwụsịtụ n'ihi ya.
Kedu otu esi akwado mbupu na Amazon?
Iji kwado nkwenye nke iwu, mmadụ kwesịrị ịnwe ihe ndị a:
Ọrụ Mbupu - youzọ ị na-eji ebufe iwu ahụ.
NJ nyocha - A ga-enye gị ID a site n'aka Onye na-ebu ụgbọelu.
Adreesị nke nkwakọba n'ụlọ ebe esi ebupụ iwu.
Nzọụkwụ iji kwenye otu usoro maka Mbupu Otu:
Chọọ maka jikwaa iwu.
Ugbu a pịa Kwenye Mbupu na kọlụm ihe.
Ozugbo Mbupu peeji nke iji mepee, tinye nkọwa ndị a: riergbọelu, ppingbọchị Mbupu, Ọrụ Mbupu, ID Ndepụta, na Adreesị nke ụlọ nkwakọba ihe.
Ugbu a pịa Nkwenye Mbupu na ala.
Nzọụkwụ iji kwenye otu usoro maka Mbupu ọtụtụ:
Soro usoro ndị a kpọtụrụ aha n'elu, ozugbo ịpịrị Nkwenye Mbupu gaa n'ihu wee pịa Tinye ngwugwu.
Ugbu a gaa na menu ndenye aha site na aha Ihe na ngwugwu. Si ebe ahụ họrọ nọmba nke ngwaahịa na iji.
Ugbu a tinye nkọwa: riergbọelu, ppingbọchị Mbupu, Ọrụ Mbupu, Ndepụta Ndepụta, na Adreesị nke Wlọ nkwakọba Ihe.
N'ikpeazụ, pịa Kwenye Mbupu.
Cheta na: Nwere ike ịgbakwunye ihe edeturu na ederede onye na-ere maka ederede gị.
Ọzọkwa, ozugbo ịmechara ịgbakwunye ọnụ ọgụgụ achọrọ nke ihe dị na ngwugwu ahụ, ndị fọdụrụ ga-agbanwe na akpaghị aka na ngwugwu ọzọ.
Esi gbanwee oge njikwa na oge nnyefe na Amazon?
Ozugbo onye ahịa nyere iwu, Amazon na-enye oge echere maka iwu iji ruo ndị ahịa. Oge a nwere ike gbanwee nke ọma iji nye ndị ahịa ezigbo oge. N'okpuru ebe a bụ usoro na otu ị ga - esi mee ya.
Iji Melite ndabere gị njikwa oge:
Gaa Leta Onye Nleta Central.
N'otu oge, na peeji nke anya ntọala na ya họrọ Mbupu ntọala.
Site n'ebe ahụ goto General Shipping Ntọala.
N'ebe ahụ gbadaa na Ijikwa wee pịa bọtịnụ dezie.
Họrọ ụbọchị dịka 1 ma ọ bụ 2. Gaa n’iru ma chekwaa ya.
Nzọụkwụ iji gbanwee oge njikwa na Ngwaahịa Nke Onwe:
Gaa Leta Seller n'etiti.
Site ebe ahụ pịa bọtịnụ Ngwaahịa. Ugbu a gaa Jikwaa Ngwaahịa.
Chọọ usoro nke ịchọrọ ịgbanwe oge wee pịa bọtịnụ idezi.
Ugbu a chọọ maka njikwa oge na-abanye na njikwa oge na ị chọrọ inye.
N'ikpeazụ, pịa Chekwa ma rụchaa.
Cheta na: Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu gbasara nke a pịa pịa njikọ ahụ Ebe a.
Atụmatụ Atụmatụ nke Amazon - Mbubata Mbubreyo
Atụmatụ ime ihe maka ịrịọ arịrịọ ọ bụla bụ atụmatụ nke ị ga-esi mesoo nsogbu a aka ma zere ya n'ọdịnihu. N'okwu a, ọ bụ Mbubreyo Mbubreyo Amazon. Enwere ike inwe ọtụtụ ihe kpatara akwa LSR gị.
Enwere ike ịmekọrịta ụzọ abụọ a: Ma ị ga-eme ya n'onwe gị ma ọ bụ were otu ọkachamara maka otu ihe ahụ. Ihe nkwusioru ọ bụla dị iche na ya mere ọ dị mkpa iji nlezianya dozie ya. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịnagide esemokwu dị n'aka wee wee usoro ahụ n'onwe gị. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị mgbe ahụ ighachi ụlọ ọrụ nkwụghachi ụgwọ ga-abụ nzọ gị kacha mma. Mmadu nwere ike ikwurita ihe gbasara ihe o gha eme ma mee ihe karie otu ihe.
Cheta na: Ọ dị mkpa igosipụta na Atụmatụ Atụmatụ gị ga-arụkwa ọrụ n'ọdịnihu.
Olee otu ịrịọ maka Mbubreyo Mbubreyo Amazon?
Maka nke a, ịkwesịrị iji akwụkwọ ịrịọ arịrịọ Amazon maka Mbubata Mbubata gị.
Iji wepụta akwụkwọ ozi mkpesa Amazon dị mma ị nwere ike ịgbaso atụmatụ ndị a:
Gbaa mbọ hụ na ị gbaghị gbaa gburu gburu ọhịa. Onye nnọchiteanya Amazon nwere ike ịghọta ọnọdụ gị. Ma, ha na-anata ọtụtụ puku arịrịọ kwa ụbọchị. Yabụ ịkọrọ gị mkpesa nke onwe gị agaghị ebelata ihe ahụ. Kama kwuo ihe bụ́ eziokwu, rapara n'ikwu okwu ndị ahụ, na otú i si dozie ha.
Ọ dị mkpa ka ị payaa ntị n'ihe owuwu ahụ. Ọtụtụ ndị mmadụ anaghị aghọta usoro. Mana n'asụsụ dị mfe, ọ bụ naanị data data na nkewa ya na leta niile. Ọ bụrụ na ịnwere ike idobe usoro ahụ mgbe ahụ, ịnwere ohere dị elu nke ịnweghachi.
Kwupụta mgbanwe ndị emere nke ọma
Bibie ihe efu, ma rapara na isi. Ọ dị mkpa na ị ga-eji akwụkwọ ozi gị gosi ụta. Ma! Lekwasị anya na mgbanwe niile ị gbanwere iji zere nsogbu ahụ. Gwa ya hoo haa ihe i mere iji zere nsogbu a ugbu a na otú ị ga-esi zere ya n'ọdịnihu.
Jiri Ihe Mgbapụta
Ọ dị mkpa iji mgbọ-mgbọ. Mgba isi na-eme ka ozi ị nyere gị karịa nke ọma. Ya mere, ọ dị mkpa ka ị jiri ha mgbe ọ bụla ọ dị mkpa.
N’ikpe azu, kọwaa atụmatụ ime ihe ọfụma. Ọ dịkwa mkpa na ị ga-eme ihe niile nwere ike ime tupu oge eruo. Ma dozie nsogbu niile dị n'aka. Mgbanwe ndị e mere bụ ihe dịịrị na mkpesa mkpesa Amazon gị. Enweghị nke ahụ ọ ga-abụ ihe efu.
Ugbu a ekwenyere m na ị ga-adị njikere izipu nke gị Mkpegharị Nkwado Amazon maka Mbupu Mbupu Mbupu. Ma, ọ bụrụ na ị bụghị mgbe ahụ, ọ ka mma ịnwe ndị ọkachamara. Ọ dị mkpa ịtụle atụmatụ a na-atụle na ọ dị mfe ịnweghachi na nnwale mbụ. Nke a bụ eziokwu na ọtụtụ n'ime ndị na-ere maara nke ọma. Ọ bụrụ n ’ị chee na ọnwụnwa gị nwere ike itufu gị oge na ego, echekwala ya.
Anyị bụ ndị Amazon Reinstatement Service na anyị obibi dị ka nke a kwa ụbọchị. N'ezie, anyị, weghachite ndị ahịa anyị maka Ogologo Mbupu Mbupu Amazon bụ ọrụ kwa ụbọchị. Anyị ga-enye gị ya dị mkpa Mkpegharị Nkwado Amazon na uche eduzi ị site na usoro ịmeghachi gị ASAP. E wezụga nke a, anyị na-enyekwa ọrụ dịka Nchọpụta ngwaahịa, Nkwalite Ahịa, Nzaghachi nzaghachi wdg. Yabụ ị nwere ike ịga nke anyị homepage na ịpị njikọ enyere ma nweta nnabata mbụ gị na - akwụghị ụgwọ site na ideju fọm ahụ.
Reinstate my Amazon Seller Account - How Reinstatement Services can Help?
Kedu ihe kpatara ị ga-eji were onye Ọkachamara Akaụntụ Amazon maka iweghachi ya?
URU OZI OMA
Ntuziaka maka nkwusioru onye na -ere ahịa Amazon: Ndụmọdụ iji zere nkwụsị na weghachite akaụntụ onye na -ere ahịa
Ihe iri ị gaghị eme mgbe a kwụsịrị akaụntụ Amazon Seller
Etu esi abawanye ahia na amazon na 2021 | Ndụmọdụ Ọkachamara | Atụmatụ & Usoro
Top 3 tozọ Zere Amazon Ndepụta Hijacking